I-Cute Honey Bee House
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSebastian
Ikhaya elihle libekwe kwindawo efanelekileyo edolophini. Kufuphi nohola wendlela, isikhululo sikaloliwe, iindlela zebhasi, iindawo zokutyela ezahlukeneyo kunye neevenkile ezithengisa ukutya. Ikhaya linendawo eninzi kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Uya kuba wedwa indlu yonke. Siya kwamkela kuphela izibini kunye neentsapho ezijonge ukuphumla. Akukho maqela amakhulu kuna 8 kwaye akukho maqela. Konwabele ukuhlala kwakho kwaye ungathandabuzi ukubuza nayiphi na imibuzo :)
Zive ukhululekile ukumisa imoto yakho ngaphakathi kwesango, wonwabele igadi, kwaye wonwabele indalo entle nenoxolo. Kuya kubakho iphakheji yolwazi kuzo zonke iindawo ezilungileyo zokutya kunye nokuhlola kuzo zombini idolophu kunye nengingqi / ilizwe. Ngokuqinisekileyo i-wifi kunye nezinto ezisisiseko zikhona.
Idolophu ezolileyo nelula ejikelezwe ziinduli kunye nehlathi. Kukho indawo yokubhaka enencasa neyoyikekayo edolophini, benza esona sonka sikhulu ndisaziyo, qiniseka ukuba usijonga.
Iindwendwe zinokuzivumela ukuba zingene ekhaya xa zifika, ndiza kukuthumela umyalezo malunga nendlela yokufumana isitshixo. Abazala bam bahlala ngaphaya kwesitrato kwaye baya konwaba ukudibana nabahambi xa befika ukuba baceliwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Trenčianska Teplá